थाहा खबर: ‘यार’का लेखक नयनराज भन्छन् : 'पुरस्कार पाइनँ भन्ने लागेको दिन लेखकको मृत्यु हुन्छ’
‘यार’का लेखक नयनराज भन्छन् : 'पुरस्कार पाइनँ भन्ने लागेको दिन लेखकको मृत्यु हुन्छ’
काठमाडौं : मान्छेको जीवनमा धेरै घटनाहरू आइपर्छन्, केही सुखद केही दुखद। केही त्यस्ता घटना हुन्छन्, जुन मानिसको जीवनका 'टर्निङ प्वाइन्ट' बनिदिन्छन्।तर यस्ता घटनालाई मान्छेले समयअनुसार विस्तारै बिर्संदै जान्छन्। आख्यानकार नयनराज पाण्डेले भने आफ्नो जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका यस्ता घटनालाई समेटेर एउटा संस्मरण नै तयार पारेका छन्।
आफ्नो जीवनमा घनिष्ठ सम्बन्ध हुन पुगेका साथी र उनीहरूसँग भएका राम्रा/नराम्रा घटना र सन्दर्भ समेट्दै पाण्डेले जीवनको संस्मरण ‘यार’ तयार पारेका छन्। जीवनमा भएका घटनामा कहिले कुन घटना घट्यो? त्यसमा आफ्नो के दोष छ/थियो? साथीको के दोष छ/थियो? यसै विषय समेटेर ‘यार’ तयार पारेको पाण्डे बताउँछन्। ‘जीवनमा धेरै घटना भए, कहिले सुखद त कहिले दुखद’, उनले भने, ‘जीवनमा आएका समस्यालाई त्यसै छोड्यौँ कि कसरी समाधान गर्‍यौँ? यो विषयलाई कोट्याएर लेख्ने प्रयास गरेको छु।’
आफूले सात\_आठ वर्षको उमेरदेखि भोगेका घटनालाई उनले आफ्नो संस्मरणमा समेटेका छन्। उनी भन्छन्, ‘जब मैले अलिअलि मित्रताको अर्थ बुझ्न थालेँ, त्यहाँदेखिको स्मरणलाई समावेश गरेको छु। यसमा वर्ष दिनअघिसम्मको मेरा मित्रहरूसँगको विभिन्न घटना क्रमलाई लेखेको छु।’ उनी यस पुस्तकमा साथीको मूल्यांकन र व्यक्तित्वको चर्चा भने नगरेको बताउँछन्।
उनले पुस्तकमा साथीसँगका सानासाना घटनालाई पनि समेटेका छन्, जसले उनको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। ‘साथीको व्यक्तित्वभन्दा पनि साथीसँगका साना कुरालाई समेटेको छु। कहिले साथीसँग झगडा भयो होला? के कारणले भयो? यस्ता ससाना कुरालाई पनि कोट्याउने प्रयास गरेको छु।' यस पुस्तकमा आफ्ना कमजोरीलाई लेखेको पाण्डेले दाबी पनि गरे।
‘यार’ आत्मकथा नभएर जीवनका विशेष घटनाको संस्मरण मात्र भएको उनी बताउँछन्। ‘यो कसैको आत्मकथा होइन। न त कुनै व्यक्तिका बारेमा यो यस्तो छ, त्यस्तो छ भनेर लेखिएको हो', भन्छन्, 'यो त साथीसँगको संगतका एउटा एउटा घटनाको संस्मरण हो।’
‘यार’ संस्मरणमा उनले २५ वटा विषय समावेश गरेका छन्। केही विषय पहिला पनि पत्रपत्रिकामा छापिएका भए पनि धेरैजसो नयाँ भएको उनी बताउँछन्। ‘यार’मा धेरै पृथक विषय भेटिने उनको दाबी छ। ‘यो पढ्दै गर्दा पठकलाई कथा जस्तो लाग्नेछ। मेरो जीवनमा आइपरेका सत्य घटनालाई मैले कथा जस्तो बनाएर प्रस्तुत गरेको छु’, उनले भने, ‘हुनत सबै साथीहरूलाई समेट्न पनि सकेको छैन। सबै साथीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध छ तर सबै सुमधुर सम्बन्धलाई लेख्न पनि सकिँदैन।' धेरै घटनाक्रम पनि भएका तर सबै लेखनयोग्य नहुने उनको भनाइ छ। 'यसमा मैले त्यस्ता घटनाक्रम उठाएको छु, जसले मेरा सोचामा हस्तक्षेप गरे।’
पुस्तकमा विद्यालय, गाउँका साथीदेखि साहित्य र चलचित्र क्षेत्रका साथीहरूसँगको घटनाक्रमलाई समेत समेटिएको उनी बताउँछन्। उनले पुस्तकबाट आफू कहाँ चुकेँ भन्ने मनन् गरेको पनि बताए। यस पुस्तकबाट समाज, सम्बन्ध र मान्छेका चरित्र प्रष्ट देखिने लेखक पाण्डेको दाबी छ।
किन संस्मरणको नाम नै ‘यार’?
लेखक पाण्डे नेपालगंजमा जन्मिएका हुन्। मधेसमा जन्मिएकाले धेरै साथी मधेसी समुदायका थिए। त्यहाँ सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई ‘यार’ भन्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय यो शब्द नेपाली समुदायमा पनि आइसकेको छ। ‘यार शब्दभित्र यति आत्मीयता छ, जस्तो अवस्था र सन्दर्भमा पनि यो उपयुक्त लाग्छ। मैले त्यसको विकल्प पाइनँ’, पाण्डेले भने, ‘योभन्दा अनौपचारिक र हार्दिकता अन्य सम्बोधनमा पाइँदैनन, त्यसकारण यो शब्दमा धेरै आयाम छ। यसै कारण पुस्तकको नाम नै यही राखेँ।’
पुरस्कारतिर नलागेपछि निर्भीकतापूर्वक लेख्न पाइने उनको अनुभव छ। पुरस्कार पाउँदैमा चर्चा नपाइने उनको बुझाइ छ। कतिपय कृतिले पुरस्कार पाएर पनि चर्चामा आएको र कतिपय पुरस्कार नपाई पनि चर्चामा रहेको उनी बताउँछन्।
मान्छेले धेरै साथीहरूको मन दुखाएका हुन्छन्। सम्बन्ध पनि यही कारणले बिग्रन्छ। तर आफ्ना यस्ता तीता मीठा कुराहरूलाई पुस्तकबाट भए पनि पोख्नलाई आफूले संस्मरण लेखेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘मैले धेरै साथीहरूको मन दुखाएको हुँला। त्यसकारण पनि मैले यो पुस्तकबाट आफ्ना भावनाहरू पोखेँको हुँ। लेखनबाट मैले सम्बन्ध बिग्रनुका तनावहरूबाट मुक्त पाउँछु जस्तो लागेर लेखेको हुँ।’
यो पुस्तक निजी गनथन मात्र नभई समाजको मनोविज्ञान भएको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रा सम्बन्धहरू किन बन्दारहेछन्? किन चाँडै बिग्रँदारहेछन् या किन टिक्दारहेछन् भन्ने कुराको कतै न कतै समाजशान्त्रीय पटो हुँदोरहेछ। आर्थिक पाटो हुँदोरहेछ। राजनीतिक पाटो हुँदोरहेछ, यसलाई नै मैले किताबमा समेटेको छु।’
'इमान्दार भएर संस्मरण लेखेको छु'
लेखकले संस्मरणमा धेरै कुरा लुकाउने गरेका हुन्छन्। संस्मरण लेखने क्रममा कतिपय लेखकले इमान्दारी देखाएका हुँदैन भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ। तर यस विषयमा आफू सचेत रहेको पाण्डे बताउँछन्। ‘यसमा म सचेत छु। लेखक बेइमान भए भने त्यो खतरनाक हुन्छ। मैले संस्मरणमा इमान्दारी देखाएको छु’, उनी भन्छन्‘, 'मैले कहीँ पनि आफू विशिष्ठ व्यक्ति हुँ। मेरो यो गुण छ भनेर आफ्नो महिमा गरेको छैन। मैले पुस्तकमा मेरा कमी कमजोरी नै खोतलेको छु।’
संस्मरण लेखिसकेपछि कतिपय साथीसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। तर पुस्तकमा साथीका कुरा समावेश गरे पनि उनीहरूसँग सम्बन्ध नबिग्रिने उनी दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘मैले लेखेका साथीहरू कतिपय त पुस्तक नै पढ्दैनन्। केही साहित्यकार साथीहरूको बारे पनि छ पुस्तकमा। तर उहाँहरूले संस्मरणमा लेखक इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। मेरो इमान्दारीलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ।’
'पुरस्कारका लागि लेखेको होइन'
पाण्डेले धेरै कृतिहरू लेखेका छन्। उनका कृतिहरू पुरस्कार पाउन पनि योग्य छन्। तर, उनका धेरै कृतिहरूले 'प्रतिष्ठित' र 'ठूला' भनिएका पुरस्कार पाएका छैनन्। आफू कहिल्यै पुरस्कारका लागि नलेख्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘मलाई पुरस्कारको आजसम्म मोह पनि भएन। मैले कहिल्यै कहीँ कतै पनि निवेदन पनि लेखिनँ।’ उनले यो कृति पनि पुरस्कारका लागि नभई आम पाठकका लागि लेखेको बताउँछन्।
‘नेपालमा कसरी पुरस्कार प्राप्त हुन्छ? सबै थाहा छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण जीवनमा कहिल्यै पनि पुरस्कारको लोभमा लागिएन। यसमा नै मज्जा पनि छ।' पुरस्कारतिर नलागेपछि निर्भीकतापूर्वक लेख्न पाइने उनको अनुभव छ। पुरस्कार पाउँदैमा चर्चा नपाइने उनको बुझाइ छ। कतिपय कृतिले पुरस्कार पाएर पनि चर्चामा आएको र कतिपय पुरस्कार नपाई पनि चर्चामा रहेको उनी बताउँछन्।
पुरस्कार नपाउँदा आफूलाई ऊर्जा आएको उनी बताउँछन्। ‘पुरस्कार नपाउँदा त झनै ऊर्जा पाएको छु’, पाण्डे भन्छन्, ‘पुरस्कार पाउन अझै लायक रहेनछु भनेर मलाई अझ राम्रा र उत्कृष्ट सिर्जना गर्ने जाँगर पनि चल्छ। म यसलाई सकारात्मक रूपले लिन्छु।’
पुरस्कार पाइनँ भनेर लेखकले गुनासो राख्न थालेपछि त्यो कुण्ठाले लेखनलाई क्षय गर्दै अन्तिममा असल लेखकलाई नै सिध्याउने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘लेखकमा लोभ भयो भने पनि लेखक सिद्धिन्छ। मैले पुरस्कार पाउनुपर्ने थियो, किन पाइनँ भन्ने लोभ लागेको दिन लेखकको मृत्यु हुन्छ।’
(पाण्डेको पुस्तक 'यार' पुस २९ गते शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक हुँदै छ।)